AILEACH - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAnthony P
UAnthony P yi-Superhost
Indlu enebhedi e-4 etofotofo, kufutshane neelwandle kunye nomdla wembali
Eli ligumbi lokulala eli-4 (iibhedi eziphindwe kabini kuwo onke amagumbi), elinye lamagumbi li-ensuite kwaye kukho igumbi lokuhlambela eliphambili elahlukileyo elineshawa. Kumgangatho ongezantsi kukho igumbi lokuhlala elineTV indawo yomlilo evulekileyo kunye nekhitshi / indawo yokutyela eneTV eyahlukileyo. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngomatshini wokuhlamba izitya, ihob/i-oveni, imicrowave njl. Ngaphandle kukho iigadi ngaphambili nangasemva kwendlu kwaye kukho indawo yokupaka iimoto eyaneleyo.
Le ndlu inomdla wembali njengoko iColáiste Uladh yasekwa ngo-1906 apha kule ndlu yaseArdsbeg, eGortahork. Yayiyikholeji yokuqala yaseIreland e-Ulster kwaye eyesibini eIreland emva kweColáiste na Mumhan e-Cork kwaye yayiphantsi kolawulo lweGaelic League.
UMary Robinson, ngelixa uMongameli wase-Ireland, watyhila i-plaque yesikhumbuzo kwi-1995 kule ndlu, indawo ye-Coláiste Uladh yasekuqaleni. Phakathi kwe
abantu abadumileyo ababefunda kule kholeji yayinguPádraig Pearse, uRoger Casement noJoseph Mary Plunkett, bonke ababulawa ngenxa yendima yabo kwi-Easter Rising eDublin ngowe-1916.
Indlu iku-1km ngaphandle kwelali yaseGortahork enevenkile ezi-2, indawo yokusela kunye nehotele.
Ipaki yesizwe yaseGlenveagh ikumgama nje weekhilomitha ezili-10. Iziko laseDunlewey liku-8km kude kumazantsi entaba i-Errigal
Ulwandle lwaseMagheraroarty lukumgama oziikhilomitha ezi-2 kuphela apho unokufikelela kwisiqithi saseTory ngesikhitshane kwaye i-Teach Coll yindawo yokutyela ecetyiswayo ejongene nolwandle lwaseMageraroarty.
Ilokishi yaseGweedore iku-8km kude kwaye inenani leebhari, iindawo zokutyela kunye nendawo yomculo ephilayo (ibha yeSean Ogs kunye nendawo yokutyela ecetyisiweyo).
Ezinye iidolophu ezikufutshane ezinonxweme oluhle yiFalcarragh kunye neDunfanaghy.
Ipaki yeArds Forest kufutshane neDunfanaghy yaziwa kakhulu ngeengoma zayo kunye neendlela kunye nembono entle yolwandle.
Le yeyona ndawo ifanelekileyo/isiseko sabakhenkcezi kunye namaqela ahamba endulini anokhenketho olukhokelwayo lwendawo kunye nezikolo zokusefa ezikufutshane.
indlu ekufutshane kakhulu [1km] edumileyo
Ulwandle lwaseMagheroarty kunye nesiqithi saseTory
Umbuki zindwendwe ngu- Anthony P